Bloomberg inotsigirawo iPhone 15 ine USB-C | Nhau dze iPhone
Bloomberg zvakare inotsigira iPhone 15 ine USB-C
alex vincent | 14/05/2022 14:00 | iPhone, Noticias
Pane runyerekupe rwakawanda rwuri kusvika kwatiri nguva pfupi yadarika nezve gadziriso inogona kuitika yechiteshi chekuchaja cheinotevera iPhone, ichisiya Mheni kumashure uye kutora yakamirirwa kwenguva refu USB-C. Kana mazuva mashoma apfuura muongorori ane mukurumbira Ming-Chi Kuo akaratidza kuti Apple yakaronga kutsiva chinongedzo ne USB-C yekuisa, ikozvino yave. Bloomberg uyo anoti Apple iri kuyedza mukati me iPhone dhizaini ne USB-C.
Apple yakaunza Mheni yekubatanidza pamwe neiyo iPhone 5, nekudaro ichitsiva iyo 30-pini yekubatanidza uye kusatora izvo zvaikumbirwa neindasitiri panguva iyoyo, iyo micro-USB. makore gumi gare gare, Apple inogona kusiya chinongedzo ichi parutivi uye iyo iPhone 14 ichave yekupedzisira kuve nemheni yekubatanidza kwete USB-C.
Zvisinei, iyo USB-C yekubatanidza haisi itsva kuApple, iyo yakatoshandura mutsara wayo wose wePads (kunze kwemuenzaniso wekupinda) kune iyi yekubatanidza. Uye zvakare, MacBooks zvakare ane USB-C yekubatanidza uye akasiya apfuura ekubatanidza kare. Ngatisakanganwewo kuti, kunyange zvazvo iPhone yakananga yekubatanidza imheni, mhando dzemazuva ano dzave kutotangwa ne USBC-Mheni yekubatanidza, saka tinogona kutaura kuti iyo iPhone inotoziva kubhadharisa kuburikidza ne USB-C. Kana, zvishoma, hafu yemhosva.
Sangana naMing-Chi uye nerunyerekupe rwekumisikidzwa kweEurope kutora chiteshi chakabatana, Bloomberg yakaburitsa muchinyorwa chinangwa cheApple chekusiya Mheni chiteshi kubva gore rinouya nekuda kwe USB-C. Izvi zvinoreva kuti yeramangwana iPhone 15, muna 2023, yaitove neichi chinongedzo chitsva.
Iko kumhanya kwekufambisa data kunogona zvakare kuve chinhu chekufunga nezve kutorwa uku.. Iwe unotoziva kuti iyo USB-C yekubatanidza ingori nzira yemuviri, asi ipapo inogona kuve nemamwe mazinga kumashure ayo anoita kuti kutamiswa kukurumidze (seThunderbolt paMacs).
Bloomberg inoratidzawo izvozvo Apple ichange ichishanda paMheni kune USB-C adapta kuchengetedza kuwirirana pakati pezvibatanidza zvose.
Neruzha rwakawanda pamusoro pazvo, zvinoita sekudaro chokwadi chekuva ne iPhone ine USB-C iri padyo. Pasina kupokana, mukana wekuvandudza kubatana kwayo uye, wadii, kuderedza huwandu hwetambo dzakasiyana dzatinoda kubhadharisa zvese zvishandiso zvedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Bloomberg zvakare inotsigira iPhone 15 ine USB-C
Maitiro ekuverenga nekupindura WhatsApp pasina kuoneka online
Apple ichavhura itsva yakagadziridzwa uye yakachipa Apple TV muna 2022